Iflethi okanye indlu ekwicomplex enomtsalane kwigumbi lokulala elinye e-Old East - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enomtsalane kwigumbi lokulala elinye e-Old East
UKim ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Igumbi lokulala elinye elinomtsalane, iflethi ephezulu kwindlu yenkulungwane enazo zonke izinto eziluncedo zendlu yale mihla ngoxa igcina loo nto inomtsalane. Ikwisitrato esipholileyo e-Old East Village, ekufutshane nayo yonke ilali! Le ndawo yindawo yokutya okumnandi, iivenkile ezidumileyo, ibhiya nokunye okuninzi!
Le ndawo yiflethi okanye indlu ekwicomplex enomnyango ophumela ngaphandle nendawo yokupaka eseyadini. Ulala kamnandi 2 kunye nebhedi enkulu kwigumbi lokulala kunye nebhedi eyisofa kwigumbi lokuhlala.
Ikhitshi lilungisiwe ngazo zonke izixhobo zombane ezintsha, kuquka umatshini wokuhlamba izitya! Umatshini wokwenza i-toaster, i-blender, kunye nomatshini wokwenza ikofu zonke ziyafumaneka. Uza kufumana nezinto ezisisiseko eziquka ikofu, iswekile, iziqholo, ezinye izinto zokuhombisa, ioyile nezinye izinto ezisisiseko. Kukho itafile enokusikwa ukuze kubekho indawo eyongezelelekileyo nendawo yokuhlala uze wonwabele ukutya kwakho okanye ikofu yasekuseni!
Igumbi lokuhlambela elisandul 'ukulungiswa licocekile kwaye linezinto ezisisiseko eziquka iitawuli, ishampu, i-conditioner kunye ne-hairdryer.
Igumbi lokuhlala linendawo etofotofo yokuphumla. Kukho i-TV ephucukileyo enentambo, kunye nedesika encinci enesikhululo sokutshaja ukuze uhlale ungenile kwaye uhlawuliswe!
Ekhitshini, kukho iveranda esandul 'ukwakhiwa ukuze kubekho indawo ephandle. Hlala, uphole, wonwabele iglasi yewayini elangeni langokuhlwa.
Le ndlu ikwisitrato esihle kwiWestern Fair District of Old East Village. Le lali yindawo ehlaziyiweyo enembali empuma yedolophu yaseLondon. Eyona ndlela iphambili yokushishina ikufutshane neDundas St., apho kukho iivenkile ezininzi zasekuhlaleni, iivenkile zokutyela kunye neendawo eziphawulekayo zenkcubeko.
Sowukufutshane kakhulu, iWestern Fair Farmers kunye neMarike yeArtisans, evulwa ngeMigqibelo nangeCawa, yeyona nto iphambili kule ngingqi. Uza kufumana neendawo eziliqela zokwenza ibhiya kunye neendawo zokwenza utywala kule ndawo, zonke zingaphantsi kweebloko ezimbalwa.
Emva kokubuka zonke iindawo ezikufutshane, idolophu ingaphantsi kwemizuzu elishumi xa uhamba ngemoto.
Undwendwe lunokuqhakamshelana nam nanini na ngomyalezo okanye nge-imeyile.